Araka io antontan’isa io dia i Madagasikara no firenena ahitana zava-manan’aina be dia be indrindra ahiana ho lany tamingana, aty amin’ny kaontinanta afrikanina. Raha toa ka ny karazana gidro no tena matetika voalaza fa mihavitsy, dia tafiditra ao anatin’io lisitra io ihany koa ireo karazam-biby hafa, indrindra fa ny bibikely. Anisan’izany, ohatra, ny karazam-balala tsy manidina atao hoe : Agkistropleuron simplex, izay tsy hita afa-tsy ao anaty alan’i Manakambahiny, any amin’iny tapany atsinanan’ny Nosy iny. Ny fahapotehan’ny ala no antony mampihena tsikelikely ny isan’ity karazam-balala ity, araka ny fikarohana. Anisan’ireo ahiana hanjavona tanteraka ihany koa ny karazana trambo atao hoe : Sphaeromimus splendidus, noho ny fahapotehan’ny alan’i Sainte Luce any Faradofay sy noho ny fitrandrahana harena ankibon’ny tany any an-toerana. Ilàna fandraisana andraikitra haingana, araka izany, ny fiarovana ny ala eto amintsika. Tokony hasiana fanaraha-maso ihany koa ny fitrandrahana an’ireo harena ankibon’ny tany fa misy fiantraikany goavana amin’ny fahasimban’ny tontolo iainana.